DOWNLOAD JDAST ỌHỤRỤ MBIPUTE - MMEMME NYOCHA - 2019
Mmehie nchịkọta nke Adobe Premiere Pro bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu n'etiti ndị ọrụ. A na-egosipụta ya mgbe ọ na-agbalị ịbupụ ọrụ e kere eke na kọmputa. Usoro nwere ike ịkwụsị ozugbo ma ọ bụ mgbe oge ụfọdụ gasịrị. Ka anyị hụ ihe bụ okwu ahụ.
Kedu ihe kpatara njehie na-eme na Adobe Premiere Pro
Ọtụtụ mgbe, njehie a na-apụta n'ihi na ekwekọghị ekwekọ na usoro maka mbupụ na codec ngwugwu arụnyere n'ime usoro. Nke mbụ, gbalịa ịdebe vidiyo ahụ na usoro dị iche. Ọ bụrụ na ọ bụghị, wepụ codec mkpọsa na wụnye nke ọhụrụ ahụ. Dịka ọmụmaatụ Quicktimenke na-aga nke ọma na ngwaahịa sitere na Adobe akara.
Banye "Ogwe njikwa - Tinye ma ọ bụ Wepụ Mmemme", anyị na-achọta ngwugwu codec na-enweghị isi na ihichapụ ya n'ụzọ dị mma.
Gaa na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị Quicktime, budata ma na-agba faịlụ ahụ. Mgbe e mechara nwụnye, anyị na-agbanye kọmputa ma na-agba Adobe Premiere Pro.
Enweghị ezu ohere disk ohere
Nke a na-eme mgbe ị na-echekwa vidiyo na ụdị ụfọdụ. N'ihi ya, faịlụ ahụ na-aghọ nnọọ nnukwu ma na-adabere na diski. Kpebisie ike ma faịlụ ga-agbaso ohere ohere na mpaghara ahọrọ. Anyị na-abanye na kọmputa m ma lee anya. Ọ bụrụ na ezughị ezu, wepụ ihe si na diski ma ọ bụ bupu ya na usoro ọzọ.
Ma ọ bụ mbupụ ọrụ ahụ gaa ebe ọzọ.
Site n'ụzọ, a ga-eji usoro a mee ihe ọbụlagodi na ohere zuru oke. Mgbe ụfọdụ, ọ na-enyere aka idozi nsogbu a.
Gbanwee aha nchekwa
Mgbe ụfọdụ, ihe kpatara njehie a nwere ike ịbụ enweghị ncheta. Usoro mmemme Adobe Premiere Pro nwere ohere iji mee ka ọ bawanye uru, ma ị ga-ewuli ọnụ ọgụgụ nke ebe nchekwa zuru oke ma hapụ ebe ụfọdụ maka ngwa ndị ọzọ.
Banye "Dezie-Mmasị-Memory-RAM maka" ma debe uru achọrọ maka Premiere.
Enweghị ikike iji chekwaa faịlụ na ebe a.
Ịkwesịrị ịkpọtụrụ onye nchịkwa gị ka ị wepụ ihe mgbochi.
Aha faịlụ ahụ abụghị ihe pụrụ iche.
Mgbe ị na-ebufe faịlụ na kọmputa, ọ ghaghị inwe aha pụrụ iche. Ma ọ bụghị ya, a gaghị edegharị ya, kama ọ ga-emepụta njehie, gụnyere mgbakọ. Nke a na-emekarị mgbe onye ọrụ na-echekwa otu ọrụ ahụ ọzọ.
Ndị na-agba ọsọ na ngalaba mmemme na mmepụta
Mgbe ị na-ebufe faịlụ, n'akụkụ aka ekpe ya, enwere mpempe akwụkwọ pụrụ iche nke ga-agbanwe ogologo oge vidiyo ahụ. Ọ bụrụ na ha adighi edozi n'ogo, ma njehie na-eme n'oge mbupu, tinye ha na njirimara mbụ ha.
Idozi nsogbu ahụ site na ịchekwa faịlụ ahụ n'akụkụ
Ọtụtụ mgbe, mgbe nsogbu a mere, ndị ọrụ na-echekwa faịlụ vidiyo na akụkụ. Akpa, i kwesiri igbutu ya n'ime otutu ozo site na iji ngwa "Ọkụ".
Mgbe ahụ jiri ngwá ọrụ ahụ "Nhọrọ" tuo ebe mbu ma wepu ya. Ya mere na akụkụ nile. Mgbe nke ahụ gasịrị, a na-ebugharị akụkụ nke vidio ahụ na Adobe Premiere Pro ọzọ ma jikọọ ya. Ọtụtụ mgbe, nsogbu ahụ apụla.
Ọ bụrụ na ihe ọ bụla adaala, ịkwesịrị ịkpọtụrụ nkwado. Ebe ọ bụ na Adobe Premiere Pro mgbe njehie na-apụta, ihe kpatara ya na-ezo aka n'ọtụtụ amaghị. Idozi ha ka onye ọ bụla na-eji eme ihe emeghị ka o kwe omume.